Sangano rePlan International Rokokera Musangano weKuzeya Kuroodzwa kweVana Vasati Vabva Zera
Vatungamiri vemakereke vopinda mumusangano wekuzeya dambudziko rekuroodzwa kwevana vasati vabva zera.
Sangano rePlan International rinoti ratanga chirongwa chekucherechedza kushungurudzwa kwemadzimai re16 Days of Activism Against Gender Based Violence nekukokera musangano wekuzeya kuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Musangano uyu uri kuitwa pamwe chete nevatungamiri vemakereke akasiyana siyana.
Muzvare Angela Machonesa vesangano rePlan International vanoti vanamufundisi vemakereke vanosvika makumi masere vanobva kunharaunda dzakasiyana siyana vakasangana muHarare vakatsidzana kuita zvese zvavanokwanisa kuti dambudziko iri ripedzwe munyika.
Angela Machonesa - Plan International
​Muzvare Machonesa vanoti zvinofadza kuti vatungamiri vemakereke vakatsidzazve kuti pamusoro pekunamatira dambudziko iri vachadzidzisa vabereki vanouya kudzisvondo dzavo zvinotaura bumbiro nemitemo pamusoro pekuroodzwa kwevana vasati vabva zera.
"Nhasi ranga riri zuva rakanaka chose nekuti vanamufundisi vange vari pamusangano uyu vatsidza kukoshesa dambudziko iri uye vatiivo vachataura nevabereki nevana vavo pamusoro penyaya dzepabonde nehuipi hwekuroodzwa kwevana vasati vabva zera'"
Muzvare Machonesa vanoti vafundisi ava vatsidzazve kushanda neavo vakatowirwa nedambudziko iri parizvino, nekudzidzisa vabereki nehama neshamwari kuremekedza avo vari kutarisana nedambudziko iri.
Svondo rapera, gurukota rezvedzidzo VaLazarus Dokora vakati vana vanosvika zviuru zvina nemazana mashanu vakange vasiya chikoro panzira kubva mukutanga kwegore rino kuti varoorwe kana kuroora vasati vabva zera.
Hurukuro naMuzvare Angela Machonesa